အောငျလ အနျဆနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးတှေ့ – ShwePyiAye
By EditorPosted on July 3, 2020
အောငျလ အနျဆနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးတှေ့ MMA ကစားသမား မွနျမာ့စပါးအုံးလို့ လူသိမြားတဲ့ ကခငျြလကျဝှသေ့မား အောငျလ အနျဆနျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ရှိနတောကို အတညျပွုစဈဆေးတှရှေိ့တယျလို့ သူ့ရဲ့ Facebook စာမကျြနှာမှာ ဒီလိုတငျထားပါတယျ ။
Dear family and friends, I got tested for covid-19 on Monday and the result came back today and I am positive. So my family and I will be quarantining ourselves for the next 14 days. I hadaslight fever, congestion, body ache and fatigue on the first two days. Besides that I am blessed that my whole family is doing well. We are really in this together and we will get over this. ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနကေ့ ရောဂါပိုးရှိ မရှိစမျးသပျခဲ့ပွီး မနကေ့ပဲ ရောဂါပိုးရှိတာ သခြောကွောငျး စဈဆေးတှရှေိ့ခကျြကို သိရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အောင်လ အန်ဆန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ MMA ကစားသမား မြန်မာ့စပါးအုံးလို့ လူသိများတဲ့ ကချင်လက်ဝှေ့သမား အောင်လ အန်ဆန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေတာကို အတည်ပြုစစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်လို့ သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ ဒီလိုတင်ထားပါတယ် ။
ဒါကြောင့် သူနဲ့သူ့မိသားစုက အိမ်ကနေ ဘယ်ကိုမှ မထွက်ပဲ ၁၄ရက် သီးသန့်နေထိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ရက်အတွင်း သူ့မှာ အဖျားအနည်းငယ်ရှိတယ်၊ အသက်ရှူ နည်းနည်းကြပ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲတယ်။ ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်တယ်။ ဒါတွေကလွဲပြီး သူတို့တမိသားစုလုံး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါတယ် လို့လည်း အောင်လအန်ဆန်က သူ့ရဲ့Facebook စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အရှေ့ခြမ်း မေရီလန်းပြည်နယ်က ဘောလ်တီမိုးမြို့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်နေပါတယ်။
Previous post လတိုငျး ထီပေါကျနတောကွောငျ့ သုံးလို့ကို မကုနျတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ ပိုငျဇရေဲထှနျးရဲ့ ဇနီးခြောလေး ဇငျသဲနိုငျ
Next post အရမျးခဈြရတဲ့ သားလေးမငျးသနျ့မောငျမောငျအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတှေ တဈဝကွီးတောငျးခွှပေေးလိုကျတဲ့ မသေနျးနု